Minisiteran’ny Fitsarana : takin’ny mpirakidraharaha ny fanalana ny Daf | NewsMada
Minisiteran’ny Fitsarana : takin’ny mpirakidraharaha ny fanalana ny Daf
Manome iray volana amin’izay fitakiana ny fanalana ny talen’ny fandraharahana sy ny fitantanam-bola (Daf) ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana ny Sendikàn’ny mpandraharahan’ny fonja sy ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha eny amin’ny fitsarana. Fantatra izany tamin’ny fihaonan’ireo sendikà roa tonta ireo tamin’ny mpanao gazety teny Andrefan’Ambohijanahary, omaly.
“Hita ny fanodinkodinam-bola”, hoy ny filohan’ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha eto Madagasikara, Rabenandrasana Nicolas. Misy ny porofo mivaingana amin’izany. Efa misy ny nalefa any amin’ny minisitry ny Fitsarana, araka ny nambarany. Ahoana, ohatra, no hilaza fa tsy misy ny vola fampandehanan-draharaha, nefa vao manitsaka ny telo volana faharoa? Mila hampahafantarina ny mpiasa ny sora-bola.
Takin’izy ireo hatrany ny fampitoviana ny fitantanana ny olon-drehetra eo amin’ny lafiny sosialy eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana. Efa nifanarahana teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana koa ny tsy fampidirana olona hiasa ao anatin’ny fotoana fohy (ECD), nefa mbola nampiditra izany ihany ny talen’ny fandraharahana sy ny fitantanam-bola, izao taona 2016 izao, raha ny fanavazan’izy ireo.